Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – मेरो व्यथा-मेरो शब्द
महात्मा गान्धीले वास्तविक भारत गाउँहरुमा बस्छ भने झैँ दार्जीलिङ पहाडको आत्मा पनि चियाकमानहरुमा बस्छ! दार्जीलिंग पहाडलाई विश्वमा प्रसिद्धी दिलाउने चियाका ‘दुइ पात एक सुइरो’ टिप्ने हातहरु पनि कमानबासी कै हो! ति खस्रो हातहरुले गरेको मेहेनतको दममा नै विश्वमा दार्जीलिंग एउटा ब्रान्डको रुपमा स्थापित छ! दार्जीलिंग भन्ने बित्तिकै दुनियाले सोच्ने गर्छ कि यहाँका बासिन्दाहारु सम्पन्न छन्! सोच्नु पनि किन नसोचोस् , मकैबारिको चियापत्तिले देशको नै महँगो चियापत्तीको तक्मा पाएको हिज-आस्ति जस्तो लाग्छ! तर वास्तविकता भने अर्कै छ! दियो मुनिको उज्यालो भने झैँ!
पर्यटक देखि लिएर प्रशासनपक्ष सम्मले शहर-बजारलाई नै सम्पूर्ण दार्जीलिंग पहाड सम्झनछन्! रहन-सहन, आचरण, पहरिन तथा प्रायलाई नै शिक्षित देखेर पनि होला पहाडबासी खुशी छन्, सम्पन्न छन भन्ने धारणा राख्दछन! बुझाउने कसले उनीहरुलाई कि यो त हाम्रो गुण हो, मेहनतको फल हो! भोग्ने तथा गर्नेलाई मात्र थाहा छ!
अब वास्तविकता हेरौ! चियाकमानमा कार्यरत प्राय जस्तो श्रमिकवर्ग सम्पूर्णरुपले कमानबाट पाउने तलब माथि आश्रित छन्! उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य ,भोजन,समाज,राजनीति, आहार तथा बसेको घडेरी सम्म बगान व्यवस्थापन माथि निर्भर छ! अवस्था यस्तो छ, कहिले पियाजको भाव बढेर ८० रु प्रति किलो सम्म पुग्छ जसमा १० रु थपिदिए एक श्रमिकको दैनिक हाजिरा हुन्छ! के दिनभरी को मेहेनत र पसिनाको मूल्य एक किलो पियाज मात्र???
आन्दोलन र उपलब्धिहरु –
चियाबारीको कन्दरा-कन्दरा सम्मले अलग-अलग समयको तथा विभिन्न थरिको आन्दोलन देखेको छ! भिर-जंगल फाडेर चियाको बिरुवा लगाउनु, स्याहार-सुस्हर गरि ठुलो गाच बानाई त्येसमा रुपिया फलाउनु देखि लिएर आज दुइ सताब्धी बित्दा पनि दुइ छाक जुटाउन संघर्ष गर्नु पर्ने स्थिति छ! कस्तो बिडम्बना…
अर्कोतिर आन्दोलन भने भइरहेको थियो, अझै पनि भै नै रहेको छ! दुइ छाक जुटाउने आन्दोलन, कसैले चोरेको हक खोज्ने आन्दोलन!!!
हिटलर देखि लिएर गान्धी सम्मको सिधान्तमा गरिएको आन्दोलन देख्यो यी कमानहरुले! चियाका हरियो पातहरु रक्ताम्मे भएको देख्यो, त्यहि बाटो भएर सेतो झन्डा बोकेर जानेहरु पनि देख्यो! माटो खुवाउने देखि लिएर माटो माग्ने आन्दोलन पनि देख्यो!
मान्छे मरे, घर,सामाजिक तथा सरकारी भवन त् कति हो कति जल्यो! बार्ता माथि बार्ता भयो! आश्वाशनहरुको पुल बाधियो! आन्दोलन धेर भयो उपलब्धि चाही थोरै! सुन्य भन्नु मिल्दैन! बोनस बढ्यो, दैनिक हाजिर पनि बढेकै हो! तर महंगाई पनि त बढ्यो!!!
बगान प्रबन्धक घेरिए, पेन डउन गरे कर्मचारीहरुले, जुलुस भयो, जानभेला भयो, भोखहर्ताल गरीयो! सक्नेले धनले नहुनेले मनले अथवा तनले सघाए!… आन्दोलन माथि आन्दोलन भयो! आन्दोलनको पनि देउता हुदो हो! बिग्रियो होला र त् एक दुइ गर्दै कमानहरु बन्द हुदैछ!
गल्तिहरु- केहि अगुआहरुको, केहि हाम्रो आफ्नै!!!-
१८४१ मा आर्थर क्याम्पबेलले सुरु गरेको चिया उद्योगको आवस्था आज पनि तेही छ! अंग्रेजको जमानाको कल-कारखाना अझै पनि नवीकरणको प्रतिक्षामा छ! प्रबन्धनपक्षको त् गल्ती छदैछ तर हाम्रो अगुआहरुको र हामी आम जनताको गल्तिहरु कम भने छैन! धेरै गल्तिहरु भयो, केहि सबै समक्ष प्रकाशमा आयो कति नजरअन्दाज गरियो! भोग्नु परयो केवल साधारण कामनबासीले!
आन्दोलन भयो तर टुंगोमा भने पुग्नु सकेन! वार्ताहरु पनि धेरै डाकियो तर नेत्रित्वपक्षको इच्छाशक्ति कमजोर भएर हो अथवा अडान स्पष्ट नभएर हो १००% सफल कहिले भएन! कहिले आधामै सन्तुष्ट हुन् पर्यो! कति बेला खाली हात फर्कनु पर्यो!
ट्रेड युनियनहरु बीच मनमुटाव साथै अ-आफ्नु वर्चस्व स्थापित गर्नको निम्ति गरिने राजनीति पनि वर्तमान स्थिति सृजना हुनको प्रमुख कारण हो! राजनैतिक सिद्धान्त नमिले पनि श्रमिकहरुको हितको निम्ति एक हुनु कर्तब्य मात्र नभएर जिम्मेवारी पनि हो!
महानतामा देखाउनुमा भने हामी अब्बलछौ! तलब नपाए पनि काममा चै कहिले अनुपस्थित हुदैनौ! कसैले दब्बाए चुप हुन्छौ, सहनसिलताको कसम खाएका छौ! हो… तेसैले हामी बिस्तारै पतन तर्फ लम्किरहेको छौ!
केहि सोच-केहि सुझाउहरु –
समय बदल्यो, मानिस बदले, सोच परिवर्तन भयो! मालिक बदल्यो,सत्ता फेरियो,नेतृत्व अर्कैको हातमा आयो तर समस्या भने उही…..!!! आज पनि श्रमिकहरु साधारण भन्दा साधारण हक देखि पनि बन्चित छन्! कुपोषण र दयनीय स्वस्थ्य व्यवस्थाको कारणले मरेको त् सुन्दै होला सबैले नै!
जहाँ इच्छा त्यहा समाधान भने झैँ चियाकमान र चियाकमानबासीलाई यो जर्जर्ता देखि उकास्ने बाटोहरु पनि छन्! खोज्न चाहे भने !
आन्दोलन अब पनि गरिनु पर्छ तर तरिका नयाँ हुनुपर्छ! बदलिँदो परिस्थिति संग मेल खाने तथा फलदायक हुनपर्छ! नेता मात्र होइन जनता पनि इमान्दार बन्नुपर्छ! फकिन्छ भने फकाउनु पर्छ,तोडेर होइन अब जोडेर आन्दोलन गर्नुपर्छ!
कसैको जिउनु र मर्नुको कुरा आउदा त्यहा राजनीति गरिनु हुदैन! जनहितको निम्ति सबै एक स्वरबद्ध हुनुपर्छ! आन्दोलनको प्रभाव उच्चस्तर सम्म पार्नको निम्ति उपलब्ध सबै साधनको सक्दो प्रयोग गर्नुपर्छ! सामाजिक संजाल, मीडिया, खबरकागज सबमा छाएको हुनुपर्छ!
अन्तमा तर सबभन्दा प्रमुख कुरा, हामीले सबक लिन सिक्न पर्छ! शिक्षा लिन पर्छ ति आन्दोलनहरुबाट जो आज पर्यन्त भएका छन् र हुदैछ! विफल भएकाहरुबाट के गर्न नहुने बुझ्नुपर्छ त् सफल भएकोबाट प्रेरणा लिनुपर्छ र अघाडीको मार्ग निर्धारण गर्नपर्छ!
मैले लेखेको विचारहरु एउटा साधारण व्यक्तिको व्यक्तिगत विचार हो! राजनेता, दार्शनिक,साहित्यकार अथवा कुनै बुद्धिजीवीको होइन! मैले मार्गनिर्देशन गर्न खोजेको हैन,आफ्नु स्तर अनुसारको सोच र सुझाव मात्र राखेको हु! उचित लागे मन्थन गर्नुहोला! अझै थप्न चाहे तल कमेन्ट अप्सन त् छदैछ!
[Sidhant Sampang runs the page Kalej Valley -Rangbull Dooteriah news Pic: pallawib’s photography for Darjeeling and Dooars Tea Workers Relief Organization – DAWN]
32,640 total views,3views today
Momos on Wheel: A saga of grit and determination GJM activist arrested for alleged assault on TMC activists
14,048 total views, 6,100 views today
43,664 total views, 6,096 views today
59,888 total views, 6,108 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 59,902 total views, 6,096 views today Comments comments
59,902 total views, 6,096 views today
59,843 total views, 6,094 views today